DAAWO:Madaxwaynaha Somaliland Oo Dalacsiiyay Abaal Marin Dheeraadana GudoonSiiyay Askari Naftiisa U Huray Badbaadinta Nafaha Dad Dhawaan Daad Ku Qaaday Degmada Dila+Sawiro |
DAAWO:Madaxwaynaha Somaliland Oo Dalacsiiyay Abaal Marin Dheeraadana GudoonSiiyay Askari Naftiisa U Huray Badbaadinta Nafaha Dad Dhawaan Daad Ku Qaaday Degmada Dila+Sawiro
Hargeysa(GNN)Madaxwaynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta darajada u dalacsiiyay abaal marin dheeraadana gudoonsiiyay askari 6 bishan lagu guda jiro naftiisa u huray badbaadinta nafaha 7 ruux oo dhawaan daad fatahaado sababay uu ku qaaday degmada dila ee gobolka awdal.
Waxaana askariga oo ka tirsan ciidamada booliska Somaliland isla markaana naftiisa u biimeeyey badbaadinta dadkaa daadku qaday lagu magacaabaa laba xadhigle Maxamed Barre.
Waxaana madaxwaynuhu dalacsiyay hal xidig isaga oo askariguna hada kamid noqday saraakiisha ciidamada Somaliland.
Munaasibadan lagu dalacsiinayay askariga ayaa waxa kasoo qayb galay madaxwaynaha Somaliland, xubno wasiiro ah, saaraakiisha ciimada iyo waliba taliska guud ee ciidamada booliska Somaliland.
Cabdilaahi Fadal Imaan taliyaha ciidamada booliska Somaliland ayaa isagu ku tolay darajada la dalacsiiyay askarigan isaga oo ku dhiiri galiyay askariga inuu halkaasi kasii amba qaado shaqada uu qaranka u hayo, sidoo kalena waxa uu uga mahadceliyay sida uu u badbaadiyay nafaha dadkaa daadku qaaday.
Madaxwaynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamud “Siilaanyo” oo isna munaasibadaa hadal kooban kasoo jeediyay ayaa ugu hambalyeeyey askariga shaqada daacadnimada ah ee qaranka uu u hayo isaga oo ku dhiiri galiyay inuu halkaas kasii amba qaado.
Talaabadan uu maanta madaxwaynuhu ku dalacsiiyay laba xadhigle Maxamed Barre ayaa waxay dhiirigalin buuxda u noqonaysaa ciidamada kala duwan ee Somaliland.